Somali News | KWIT
By Halima Osman • Dec 1, 2020
Somali News 12.01.2020
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay in Nofeembar ay keentay kororka ugu weyn ee COVID-19 tan iyo bilowgii cudurka safka.
Waxay tiri isbuuca ugu horeeya ee bisha waxaa arkay 28,000 oo kiis oo cusub oo leh qatar ah 32%.
Tirooyinkaas waxaa la jaray nus wiig ee Thanksgiving-ka xitaa heerar sare oo imtixaan aha.
Reynolds ayaa tiri inkasta oo dadaalladii ugu dambeeyay ee lagu joojinayay faafitaanka fayrasku u muuqdeen inay shaqeynayaan, ayay tiri Iowans weli waxay u baahan yihiin inay feejignaadaan oo ay raacaan talooyinka caafimaadka.
Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warisay 24 dhimasho dheeraad ah iyo in ka badan 1,900 xaaladood oo cusub.
Reynolds wuxuu tilmaamay in isbitaalada la dhigaayo ay kufilan yihiin gobolka oo dhan, laakiin aysan kujirin Gobolka Woodbury. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ka warbixiyay 108 wadarta bukaan jiifka ah labada isbitaal ee Magaalada Sioux. Taasi waa garaacid abid-heer sare ah rikoorkii shalay ee 102.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale iftiimiyay arimaha caafimaadka maskaxda ee ka dhashay faafida. Waxay tiri laga soo bilaabo Maarso ilaa Sebtember Iowa waxaa ka dhacay 319 qof oo isdilay, tiro aad uga badan labadii sano ee la soo dhaafay.
Websaydhka covidrecoveryIowa.org wuxuu siiyaa ilo loogu talagalay dadka ay la soo deristo niyad jab, walwal iyo arrimo kale oo maskaxeed.
Barnaamijka lagu maalgeliyey Iowa COVID Soo-kabashada Deeqaha wuxuu maalgeliyey 105 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha iyada oo la siinayo la-talin farsamo oo bilaash ah iyo taageero kale, oo ay ku jiraan talooyinka waalidnimada
Badhasaabka ayaa sidoo kale kahadlay waxbarashada intii lagu jiray warbixintii uu kahelay Des Moines. Waxay tiri hadafkeeda koowaad waa inay caruurta ku sii hayso fasalka maadama inbadan ay iskuul leeyihiin halka kaliya ee ay ka helaan bulshada iyo xitaa cuntada. Dugsiga Dhexe ee Galbeedka ee Magaalada Sioux City ayaa dib u bilaabaya shaqsiyan wax barashada shalay kadib markii uu u wareegay waxbarashaddii caadiga ahayd kadib markii uu ka dillaacay iskuulka labo todobaad ka hor.
Sida tallaalka, Reynolds wuxuu ku rajo weyn yahay in Iowa uu arki doono mid ka hor dhamaadka sanadka.
Tirada isbitaalada la seexinayo ee labada xarumood ee caafimaad ee ugu waa weyn magaalada Sioux City
By Halima Osman • Nov 30, 2020
Tirada isbitaalada la seexinayo ee labada xarumood ee caafimaad ee ugu waa weyn magaalada Sioux City ayaa gaartay heerkii ugu sareeyay abid intii lagu guda jiray Cudurka faafa ee COVID-19. MercyOne iyo UnityPoint Health-St. Luke’s waxay daryeelayaan 102 bukaan oo la isku daray. Heerkii hore wuxuu ahaa dabayaaqadii Maajo markii heerarka bukaanku gaareen bartamihii 90.
Iowa maanta waxay soo warisay kororkeedii ugu badnaa ee maalinlaha ah ee dhimashada COVID-19
By Halima Osman • Nov 25, 2020
Iowa maanta waxay soo warisay kororkeedii ugu badnaa ee maalinlaha ah ee dhimashada COVID-19, oo sare ukacday calaamadda usbuuc kahor. Degmada Woodbury waxay sare u kacday 10,00o kiis oo coronavirus ah.
Iowa ee Waaxda Caafimaadka Dadweynaha maanta waxay soo warineysaa 47 kale oo dheeri ah oo u dhimanaya COVID-19. Guud ahaan, 2,271 qof oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintey Iowa, sida lagu sheegay bogga gobolka ee Coronavirus.Iowa.gov. Waxaa jiray ku dhowaad 220 kun oo kiis oo wanaagsan.